Izinduna zingabangane bamantombazane noma izitha zempilo? Ngaphandle kwefasitela egcwele imvula ekwindla, amaqabunga aphuzi aphelile, futhi isimo sengqondo ngesizathu esithile siphelele ngokuphelele. Izakhamuzi eziningi zengqondo zincoma ukuhamba ngaphandle ukulwa nokucindezeleka nokucindezeleka. Futhi hhayi nje ukugijima okusheshayo ngaphansi kwesambulela emasinini, kodwa izinyawo ezingenasidingo. Kumele ubukeke sengathi uyiNdlovukazi futhi kufanele uqaphele kakhulu owesilisa. Yikuphi okungcono: izicathulo ezinesithende noma ngezinyawo? Yini eyingozi kakhulu empilweni yethu?
Esinye sezici ezibaluleke kakhulu kwengubo yokuhamba okunjalo yisithende esiphezulu. Sekuyisikhathi eside sekuyaziwa ukuthi isithende sishintsha hhayi kuphela umqondo womuntu wesifazane, kodwa nesimo sakhe sengqondo. Noma yikuphi owesifazane noma intombazane eba ngaphezulu kocansi futhi uheha imibono engaphezu kwesigamu samadoda azungezile, okuyinto enhle cishe wonke umuntu. Mhlawumbe, yingakho amantombazane asebancane aqala ukuzama ngasese izicathulo zikamama ngesikhumba sokubheka izinwele futhi abheke phambili lapho bengakwazi ukufaka izicathulo zabo zokuqala ngesithende.
Abaningi bayakusho ukuthi isithende siyiqiniso. Kodwa empeleni akuwona yonke indawo imigwaqo eqhubekayo njenge-asphalt - hhayi isikhathi eside nomlenze, ngisho nentamo ukuphumula. Futhi izikhathi eziningi zezwa ukuthi isithende esiphezulu sinokulimaza impilo yabesifazane: ubuhlungu obuhlukahlukene emajoyini, i-radiculitis, ukuvinjelwa komgogodla, imivimbo ye-varicose nezinye izinkinga eziningi - konke lokhu kulindeleke ukuthi umthandi wezicathulo ezinjalo. Lokhu kusebenza kuma-pinplant okuthiwa izinwele, nakwezithende ezinezici eziningi. Izicathulo "eziyingozi kakhulu", ezihlanganisa izithende eziphakeme kakhulu zinezinyawo ezincane ezinjalo ezinqoleni ezinjalo zikhandla ngokushesha, ukujikeleza kwegazi kuphazanyiswa, imisipha kanye nezinthambo zikhubazekile.
Ngakho-ke okufanele ukwenze: uziphike ngokuphelele lokhu kujabulisa - yiba mnandi kunazo zonke, ubuhle futhi bukhangele - bese uhamba nezicathulo emagcekeni aqinile? Futhi akekho! I-sole eqinile ingabangela nezifo ezihlukahlukene ezimbi: ukuphazamiseka kokuphazamiseka kuphazanyiswa, izigulane zithelwa, i-arthritis ingenzeka, njll. Ngakho-ke, kuyingozi hhayi ngaphansi kwesithende esiphezulu. Ukwengeza, owesifazane onjalo izicathulo ngezinye izikhathi ubheka ngokungahleleki, isibonelo, emcimbini.
Kufanele uthole "igolide elisho". Ukuze ugqoke kwansuku zonke, ochwepheshe batusa ukuthi ugqoke izicathulo ngokuphakama kwesithende se-2 - 3 cm, ukuhamba ngezinyawo ezinyangeni ezinamathele, futhi ukubonakala kokukhanya ungagqoka izithende eziphakeme.
Noma yiziphi izicathulo ezithandwayo, kufanele kukhunjulwe ukuthi izinyawo zidinga ukunakekelwa, futhi akuyona neze indlela ebiza izindleko futhi zivakashela ama-beauty salons. Izinqubo eziningi zingenziwa ekhaya nokusetshenziswa kwezindlela ezingalungisiwe. Ekuseni nakusihlwa kuyasiza ukwenza izinyawo zokugaya. Ungakwazi nje ukushaya izicathulo ezungeze indlu isikhathi esithile. Ngaphambi kokuba le mizuzu engu-1 kuya kwemibili ibambe izinyawo zakho emanzini abandayo. Uma kungenzeka, ngenkathi efudumele kufanelekile ukuhamba ngezicathulo ngamatshe amanzi, utshani noma isihlabathi - kuhle ukukwenza lokhu njalo.
Uma imilenze yakho ikhathele, udinga nje ukuwalungiselela ukugeza okufudumele ne-decoction yamakhambi noma ikhefu yokuphuza. Kuwusizo ukushintsha amanye amathreyi enamahlombe okugubha ngamacube amaqhwa.
Ungagudluli izandla zakho ekuvupheni. Ngisho ukuvuvukala okuncane kungagcina kuholele ezifweni ezimbi ezidinga ukunakekelwa kwezokwelapha. Ungathenga emakhemikhali amakhemikhali alungile, usiza kahle ukusikhipha i-yarrow ne-parsley. Kodwa kunoma yikuphi, kufanelekile ukubonisana nodokotela, ngoba ukuzivocavoca kuvame ukulimaza.
Ukuqeda umkhuba omubi wokuchitha izimpelasonto elele embhedeni. Futhi funda ukwenza umzimba olula oqinisa amathole nezinyawo. Uma kufanele usebenzise indlela yokuphila "yokuhlala" emsebenzini, kufanele uthathe ama-exercises afudumele ongayenza phakathi nosuku lokusebenza.
Kudingeka izithende eziphakeme ukuba "ujwayelane" kancane kancane, ikakhulukazi kumantombazane asemusha, izinyawo zazo zisesiteji sokwakheka. Kumele uqale ngokugqoka izicathulo ezisezingeni eliphansi kuze kube yihora elilodwa ngosuku, kancane kancane ukwandisa ukuphakama nesikhathi. Ngalokhu kuguqulwa izicathulo ngezithende eziphakeme kakhulu kulula ukuhamba kahle ukuhamba okuhle. Phela, ukuhamba ngama-stilettos kuyi-art yangempela.
Ukuthengwa kwezicathulo ezintsha kuhlelwe kangcono kusihlwa - ngalesi sikhathi imilenze ivame ukuvuvukala. Qinisekisa ukuthi uzama izicathulo zombili zombili - ngezinye izikhathi kwenzeka umshado wefektri, futhi esinye isihlangu singase sibe sikhulu noma sibe mfushane kunezinye. Ungabi namahloni ukugxuma futhi ugcobe izicathulo ezintsha - ngokushesha ungabheka ukuthi umlenze onjani kuleso simo esisha ukhululekile futhi ulula. Yini engcono: izicathulo ezinesithende noma ezingxenyeni? Ukuzikhethela kungokwakho! Kodwa yonke intombazane iyaqonda ukuthi ngaphandle kwezithende akukho ukuphila emhlabeni wonke!
Imithetho yokukhethwa kwezicathulo zabesifazane
Izicathulo zomuntu zangempela: izixazululo eziphathekayo zokwindla 2016
I-Grechaniki eneqanda eligxilwe
Ikhekhe le-chocolate we-silika
Izindlela zemvelo zokuzinakekela
Amaqebelengwane angama-chocolate nge-liqueur mint
Indlela yokwenza ifoni iphelelwe ephepheni
Izigaba ze-Erogen A, P no-U: abancintisana bathi i-G
Inhlama emfushane yaseSwitzerland